Ny ala Macolline dia miditra ao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny ala Macolline dia miditra ao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina
Faly ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany (ATB) fa nanatevin-daharana ny ATB ho mpikambana ao aminy ny ala Macolline any Avaratra Atsinanan'i Madagasikara.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia faly milaza fa ny ala Macolline any avaratra atsinanan'i Madagasikara dia niditra ho mpikambana ao amin'ny ATB.
Macolline dia ala teratany 25 hektara ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara naorin'i Marie-Helene Kam Hyo. Niorina tamin'ny 2001, Macolline misokatra handray mpizahatany, mpianatra ary mpahay siansa. Ho an'ny tontolo andro iray feno fialamboly, ity tranokala ity dia ahitana làlana an-tongotra, lakana pirongo (lakana lakana) mitaingina tanimbary sy ala mando ary biriky ary hamarana ny andro miaraka amin'ny piknik mahafinaritra manoloana ny Ranomasimbe Indianina.
Ity faritra ity dia niharan'ny fahasimbana mafy nandritra ny zato taona mahery, ary i Macolline dia nanolo-tena amin'ny fiarovana sy ny ala indray ny karazan-javamananaina teratany mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ataon'ny UNESCO. Ny fikojakojana ny Macolline dia manome asa ho an'ny mponina maro, ka izay vola rehetra angonina ho an'ny Macolline dia manampy amin'ny fanohanana (CALA) ny Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha (Komitin'ny vonjy taitra Leprosy any Antalaha).
Ny mpanorina ny Macolline, Marie-Helene Kam Hyo, dia nilaza hoe:
“Ho fanampin'ny hetsika nentim-paharazana ao amin'ny valan-javaboary mpizahatany, dia mikasa ny hampitombo ny fahafantarana ny karazan-ala malagasy isan-karazany toy ny zava-maniry sy ny fampiasana azy io tranonkala io. Ny tranokala dia mamela ihany koa ny mpitsidika tsirairay hamboly hazo ary mandray anjara amin'ny fitahirizana ilay tranokala sy ireo karazana fandrahonana ary koa mandray anjara amin'ny ala ala. Ilaina indrindra eto amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagascar izay atahorana mafy ny ala. ”
Ny Macolline dia fitambarana fitehirizana voajanahary, fiarovana ary fanatsarana ny tontolo iainana malagasy. Ahitana havoana mirefy 10 hektara izay ahitana karazana ala voalohany (tany am-boalohany), hazo fihinam-boa, ary karazana varotra. Manaraka ny renirano iray ary miatrika ny Ranomasimbe Indianina, 3 km miala ny tanànan'i Antalaha, Macolline dia toerana miavaka ho an'ireo tia natiora, mpianatra, mpahay siansa ary botaniôma.
Juergen Steinmetz, mpikambana ao amin'ny komity mitarika ny fizahan-tany any Afrika ary filohan'ny fiaraha-miombon'antoka iraisan'ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany fantatra amin'ny anarana hoe ICTP, dia nilaza hoe:
“Mila ny feony manokana i Afrika amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Miaraka amin'ny firenena 54, kolontsaina maro hafa, ary harena manintona, dia kaontinanta mbola hita ihany. Ny vinanay dia ny hampiorina ny ATB isaky ny toerana alehan'ny mpikambana sy amin'ny tsenan'ny loharano rehetra. Hamorona tambajotra manerantany ho an'i Afrika izany ary ahafahan'ny base rehetra mifampiresaka.
“Manasa ireo mpandray anjara izahay hanana adiresy mailaka na tranokala eo amin'ny lampiharanay. Izany dia hampiakatra ny fahatokisan'ny mpanjifa ary hanome vahana ny orinasa madinidinika sy salantsalany any Afrika hanao orinasa amin'ny tsena loharano.
“Ny fizahantany dia midika ho andraikitra sy faharetana, ary ny fizahantany dia midika ho fandraharahana, fampiasam-bola ary tokony hidika hoe fanambinana. Ary eto no ahafahan'ny Birao Afrikana fizahan-tany manampy betsaka. Rehefa noforonina ny komity mpitarika antsika, ny tanjon'ny Birao Fizahan-tany any Afrika dia ny hamadika an'ity hetsika ity ho fikambanana mitokana amin'ny volana aprily 2019.
Niorina tamin'ny taona 2018, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia fikambanana iray ankalazaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izy mpihetsiketsika amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra afrikanina.
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia ao anatin'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP).
Amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo mpikambana tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanja ary ny kalitaon'ny dia sy fizahantany mankany, avy any, ary afrika.
Ny Fikambanana dia manome ny fitarihana sy ny toro-hevitra amin'ny lafiny tsirairay sy iombonan'ny fikambanana mpikambana ao aminy.
Ny Fikambanana dia mivelatra amin'ny fotoana mety amin'ny marketing, fifandraisana amin'ny daholobe, fampiasam-bola, marika, fampiroboroboana ary fametrahana tsena manokana.
Monterey County fizahan-tany mandeha amin'ny fivelarana maharitra
Mekong fizahan-tany dia nanao fanentanana momba ny fanaovana tantara an-tsary vaovao